स्थानीय तहको चुनावमा फेरि वामपन्थी एकता सम्भव छ ? - Narayanionline.com Narayanionline.com स्थानीय तहको चुनावमा फेरि वामपन्थी एकता सम्भव छ ? - Narayanionline.com
स्थानीय तहको चुनावमा फेरि वामपन्थी एकता सम्भव छ ?
काठमाडौं, चैत ८-
एक दशक भन्दा लामो समय नेकपा एमालेका शक्तिशाली महासचिव रहेका नेता नेपालले पार्टी विभाजन गर्दै एकीकृत समाजवादी नामक दल दर्ता गरे । जसलाई नेकपा एमालेले अहिले ुअवैधु पार्टी भनिरहेको छ । आफूहरुले कारबाही गरेको सूचना सभामुखले टाँस नगर्दा नेपालसहितका नेताले नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध उत्रियो ।
मंगलबार उनले विराटनगर पुगेर नेता कार्यकर्ताहरुको मत गठबन्धन गरेर चुनावमा जान हुँदैन भन्ने रहेको भए पनि २०७४ सालमा जस्तो एमाले र माओवादीहरू फेरि मिल्लान् कि भन्ने चिन्ता रहेको बताए । पछिल्लो समयमा कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्ने पबताइरहेका नेता कोइरालाले कांग्रेस एक्लै अघि बढ्दा वामपन्थीहरू फेरि मिल्न सक्ने जोखिम औंल्याए । तर, ओलीको अरु वामपन्थी पार्टीसँग गठबन्धन नहुने अभिव्यक्तिले भने कांग्रेसलाई राहत भएको छ । तर, कांग्रेस पूर्ण रुपमा विश्वस्त हुन सकेको छैन । न्यूज कारखाना